Fitakiana ireo Nosy malagasy : “Tokony ho tonga saina ny Malagasy”, hoy ny AKFM | NewsMada
Fitakiana ireo Nosy malagasy : “Tokony ho tonga saina ny Malagasy”, hoy ny AKFM
“Ahoana moa ny fomba hahazoana ireo Nosy malagasy ireo, raha misakana izany ny fitondrana malagasy?” hoy ny eo anivon’ny Hetsika Madagasikara miaro ny Nosy malagasy, ny filoha nasionalin’ny AKFM, Rakotomanga Eric, teny Andravoahangy Ambony, afakomaly, momba ny fitakiana ireo Nosy malagasy.
Anjaran’ny Malagasy ny mieritreritra hoe: izany ve ny fipetraky ny raharaha amin’izao fotoana izao? Horaisin’ny vahoaka malagasy ho miray tsikombakomba amin’ny fitondrana frantsay izay misakana an’io… Mieritreritra ry zareo mpitarika ny fitakiana fa tsy tokony handeha amin’izay lalana izay ny fitondram-panjakana.
“Mino izahay fa tsy maintsy hahazo an’ireo Nosy ireo ny herim-bahoaka, izay mbola iantsoanay indray ny vahoaka malagasy. Satria arakaraka ny mahabetsaka antsika no ahitan’ny fanjakana frantsay fa mitaky an’ireo tokoa isika Malagasy”, hoy izy.
Hita tamin’ny hetsika teny Ambohijatovo farany teo: na tsy misy resaka fanjakana malagasy aza ny fangatahan-dalana natao, tsy navelan’ny fitondram-panjakana malagasy tamin’ny alalan’ireo mpitandro filaminana ny hetsika. Nanao ny fomba rehetra hisakanana izany ireo mpitandro filaminana, araka ny fanazavany.
Fantatra izao fa hamondrona ny herin’ny Malagasy rehetra tia tanindrazana ny eo anivon’ny Hetsika Madagasikara miaro ireo Nosy malagasy. Izay no hoentin-dry zareo amin’ny hetsika manaraka aoriana kely.